Efa an-dalana: ho tonga eto ilay « chapiteau » fanaovana « cirque » | NewsMada
Efa an-dalana: ho tonga eto ilay « chapiteau » fanaovana « cirque »
Tsy mbola fahita teto Madagasikara! Ho tonga tsy ho ela eto ny “chapiteau” na ilay trano lehibe fanaovana fampisehoana “cirque”. Endrika iray ahafahana milaza fa hanana fivelarana tsaratsara kokoa hatrany ity zavakanto ity, atsy ho atsy…
Niainga tany Loire Frantsa, ny alahady 13 janoary teo, ilay sambo Le Kreizh, mitondra ilay « chapiteau » lehibe fanaovana « cirque » ho aty Madagasikara. Araka ny tombana, ho tody soa any amin’ny seranan-tsambon’i Mahajanga ity entana sarobidy ity, ny volana febroary ho avy izao, satria maharitra 40 andro eo ho eo ny dia.
Raha tsiahivina, mihamiroborobo ny fanaovana « cirque » eto amintsika, indrindra noho ny fisian’ny sekoly natokana ho amin’izany, ny Chapitô metisy, izay namorona ny fikambanana L’aléa des possibles. Efa marobe ny ankizy sy tanora nandalo tao, nianatra momba ny « cirque ». Efa nisy koa fandraisan’ny tanora manao fizàrana asa na « stage », roa taona mahery izay.
Hatreto, ny olana lehibe, ny tsy fisian’ny trano natokana hanaovana « cirque » na irony « chapiteau » lehibe, efa fampiasa any ivelany any, irony. Noho ny fiaraha-miasa eo amin’ny L’aléas des possibles sy ny fikambanana Hetsika Madagascar any Frantsa ary ny Le cirque Baroque, nahazo « chapiteau » ny fikambanana.
Nisy ny tolo-tanana tamin’ny endriny samihafa tamin’ny fividianana sy ny fitaterana ity fitaovana lehibe ity ho aty Madagasikara. Araka izany, sambany hanana « chapiteau » fanaovana « cirque » ny eto amintsika. Andrasana ny fahatongavan’izany, hahafahan’ireo mpiantsehatra maneho ny talentany, izay tsy fahita matetika.